Akaadeemiyadda Maandeeq – Sen. Abshir Axmad
Akaadeemiyadda Maandeeq – Dugsiga Ubadka Barakacayaasha
Dagaalo daba dheeraaday iyo xasarado soo noqnoqday sannado badan ayaa si xun u saameeyey qoysas fara badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo gefsiiyey fursadihii nolosha ka dib markii ay ka baro kaceen hoygoodii iyo deegaankii ay noloshoodu ku tiirsaneyd.
Waxaan shaki ku jirin in caruurta oo ah kuwa ugu badan qoysaskaas ay si gaar ah u saameysay colaadahaas dabo dheeraaday maadaama ay ubadkaasi ku jiraan da’dii iyo xilligii uu u bilowday socdaalkii ay ku abuurayeen rajooyinkooda kuna xaqiijinayeen riyooyinkooda, socdaalkaas oo qasbaya in ay helaan nolol nagaadi leh oo u suurtagelin karta waxbarsho.
Aniga oo ka qayb qaadanaya dadaalka ay u baahan yihiin ubadkaasi in ay dib cagta u saaraan wadadii rajada iyo rumeynta riyooyinkooda ayaa Xafiiskeyga Adeega Dadweynaha daahfuray sannadkii 2017 Akaadeemiyada Maandeeq oo ay si bilaasha ha wax uga bartaan ubadkaas colaadaha iyo aafooyinka kale ee nololeed ay ku soo barakiciyeen magaalada Cadaado, ee deegaanka Galmudug.
Xafiiskeyga Adeega Dadweynaha ayaa sidoo kale ka caawiya ubadkaas agabka waxbarsho ee lama huraanka u ah waxbarashadooda sida dharka dugsiga, buugaagta, qalimada iyo gunnada barayaasha kuwaas oo qayb ka mid ah waqtigooda ku tabaruca.
Akaadeemiyada oo ah goobta keliya ee fursad waxbarasho siisa caruurtaasi ayaa waxaa ay rajo weyn u tahay caruurtaasi oo waqtigan ku qasbanaan lahaa in ay ku noolaadaan nolo rajo la’aan ah. Akaadeemiyada Maandeeq waxaa hada dhigta in ka badan 200 oo caruur ah oo dhammaantood ka soo jeeda qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool degmada Cadaado.
Wiilasha iyo gabdhaha yar yar ee dhigta Akaadeemiyada Maandeeq waxa ay metelaan rajada malaayiin caruur ah sidoo kale waxa ay tusaale u yihiin xaqiijinta riyooyinka ubad badan oo ay shalay isku nolol iyo duruuf ahaayeen
Waxaa laga yaabaa in ay waayeen waalidkood, guryahoodii iyo saaxiibadood, rajo beelna uu ku habsaday hase yeeshee mar kale ayey rajo u bidhaantay iyaga oo rumeystay in ay hada suurtagal tahay in ay riyadoodii mar kale u rumowdo. Eebow Aamiin!
Hadaba, aniga oo ay iga go’an tahay wax ka bedelka nolosha iyo aayaha ubadkaas iyo kuwa kale oo weli u baahan rajo abuur iyo nolol negaadi leh ayaan ku bixin doonaa dadaal kasta oo aan ku caawin karo ubadkaas Soomaaliyeed oo ah Caymiskii Mustaqbalkeena Runta Ah.